Akụkọ - Ọrịa ahụ agaghị akwụsị n'oge na-adịghị anya！
"Ntiwapụ ozuru ụwa
Agaghị agwụ n'ime afọ 1-2 ”
Okpueze ọhụrụ ahụ nwere ike jiri nke nta nke nta ghọọ ọrịa na-efe efe nke na-efe efe n'oge dị nso na influenza, mana mbibi ya karịrị influenza. ” N'isi ụtụtụ nke December 8, Zhang Wenhong, onye nduzi nke Ngalaba Na-ahụ Maka Ọrịa Na-efe Ọrịa, Hospitallọ Ọgwụ Huashan, Mahadum Fudan, kwuru na Weibo. Na 7th, Shanghai kwupụtara nsonaazụ nchọta nke ikpe 6 a gosipụtara na-egosi n'etiti November 20 na 23. Ebe ndị nwere ihe ọghọm emepe emepela mgbe izu abụọ emechiri. Thewa nke mechiri emechi ejirila nke nta nke nta nụ ụdị akụkọ ọ bụla, atụmanya maka igbochi ọrịa na-adịkwa jụụ, mana ọtụtụ ihe omume ekpughela ọnọdụ ga-ekwe omume maka mgbanwe ụwa n'afọ ọzọ. Otu esi eme mgbanwe mba na mba nke oria ojoo
Banyere myirịta dị n'etiti Shanghai International Import Expo na atụmatụ asọmpi egwuregwu Japan nke Games Olympic, Zhang Wenhong kwuru na nke mbụ, na Nọvemba 10, e mechiri Shanghai International Import Expo nke ọma n'okpuru njikwa mmechi. Ndị Inbound mejuputara njikwa mechiri emechi wee pụọ mba ahụ mgbe nzukọ ahụ gachara. A ga-anwale ndị ọbịa niile maka acidic nucleic na enweghị mgbochi ndị ọzọ a ga-etinye. Onu ogugu kariri nde mmadu 1.3 sonyere na CIIE. Enwere ike iwere mmepe ya nke ọma dị ka nyocha nke nnukwu mmekọrịta mmekọrịta mba ụwa, n'agbanyeghị na ọ dị obere.
Zhang Wenhong gosipụtara na n'izu gara aga ya na ndị ọkachamara dị mkpa na-egbochi ọrịa na-efe efe na Japan nwere mgbanwe. E kwesịrị ilebara ihe ọmụma abụọ anya. Otu bụ na Japan ga-eme egwuregwu Olimpik dịka akwadoro, nke ọzọ bụ na Japan enyego iwu ọgwụ mgbochi afọ zuru oke maka afọ na-esote. Agbanyeghị, ntuli aka nke echiche na-egosi na ọ bụ naanị 15% nke ndị mmadụ nwere agụụ siri ike ịgba ọgwụ mgbochi, ihe dịka 60% na-ala azụ, na 25% fọdụrụnụ ekwupụtala n'ụzọ doro anya na a gaghị agbanye ha. Kedu ka asọmpi Olimpik ga-esi malite n'ọnọdụ dị otu a enweghị ike inye aka bụrụ ihe na-akpali iche echiche.
Usoro mgbochi ọrịa nke Kọmitii Olympic Japan na-ekwupụta nwere ọtụtụ myirịta na nke Shanghai International Import Expo. Enwere ike ịhụ na usoro ndị a nwere ike ịbụ ndebiri ndebanye maka ụwa ibido mgbanwe n'ọdịniihu. Maka ndị na-eme egwuregwu si mba na mpaghara nwere ọrịa na-efe efe karị, a ga-anwale ha maka nje okpueze ọhụrụ mgbe ha rutere n'ọdụ ụgbọ elu ndị Japan. Tupu nsonaazụ ule ahụ dị, ndị na-eme egwuregwu nwere ike ịnọ naanị na mpaghara akọwapụtara ma mejuputa njikwa mechiri emechi.
N'adịghị ka atụmatụ mgbochi ọrịa nke egwuregwu Japan, egwuregwu Japan na-ezube ịme nyocha nuklia acid maka mbata mba ofesi ilele asọmpi ahụ. Mgbe nbanye, enweghị mgbochi ije yana enweghị mgbochi iche, mana achọrọ itinye APP trajectory post-ntinye. Ozugbo okwu dị, achọrọ mgbochi na njikwa kpọmkwem. Ebumnuche iji soro ndị niile jikọrọ nso wee were usoro mgbochi ọrịa zuru oke. Nke a yikwara usoro mgbochi na njikwa nke Shanghai International Import Expo na ọrịa a na mpaghara.
Mgbochi na njikwa kpọmkwem ga-aghọ nhọrọ zuru ụwa ọnụ
Zhang Wenhong kwuru na mgbochi na njikwa ga-eji nke nta nke nta bụrụ nhọrọ zuru ụwa ọnụ. N’oge na-adịbeghị anya, egbochiri ọtụtụ mpaghara ihe egwu dị na Shanghai. Igodo nke mgbochi ọrịa na Shanghai oge a na-adabere na nsuso nsuso na nyocha zuru oke na mpaghara ụfọdụ nwere nsogbu. Nke a na-enyekwa nhọrọ maka nnukwu obodo ukwu iji belata ikike dị ukwuu na ọrụ akụ na ụba site na mgbochi na njikwa.
Site na mgbasa ozi nke ọgwụ mgbochi, ụwa ga-eji nwayọọ nwayọọ mepee. Otú ọ dị, n'ihi na ịgba ọgwụ mgbochi na-esi ike ịbụ nke zuru ụwa ọnụ (n'agbanyeghị nsonaazụ nyocha dị ugbu a nke ebumnuche ịgba ọgwụ mgbochi ọ bụla ma ọ bụ eziokwu na mmepụta zuru ụwa ọnụ siri ike iru n'otu ụzọ), ọrịa zuru ụwa ọnụ agaghị akwụsị n'ime afọ 1-2. Otú ọ dị, na ọnọdụ nke imeghe ụwa na nhazi nke igbochi ọrịa, nkenke mgbasa ọrịa nwere ike jiri nwayọọ nwayọọ ghọọ nhọrọ zuru ụwa ọnụ n'ọdịnihu.
O kwuru na n'ihe banyere mmepe ụwa nke nwayọ nwayọ na mgbasawanye nke ọgwụ mgbochi, usoro ahụike nke China ga-azarịrị nke ọma. Mgbe a gbasasịrị ndị mmadụ n'ihe ize ndụ dị ukwuu, ihe ize ndụ nke okpueze ọhụrụ ga-eji nke nta nke nta belata n'ọdịnihu, ọ nwere ike jiri nke nta nke nta gbanwee ghọọ ọrịa na-efe efe n'oge a na-efe efe na nso influenza, mana nsogbu ya karịrị influenza. N'akụkụ a, nnukwu ụlọ ọgwụ ga-enwerịrị ngalaba na-ahụ maka igbochi ọrịa na ngalaba nzaghachi, ya bụ, ngalaba ngalaba na-efe efe. Na nzaghachi na nke a, Shanghai Municipal Health System nwere nzukọ na Shanghai First People Hospital na ngwụsị izu. Fọdụ ndị isi ụlọ ọgwụ sitere na Yangtze River Delta na Pearl River Delta sonyere na mkparịta ụka na-ekpo ọkụ wee tụlechaa atụmatụ mgbochi na njikwa COVID-19 n'ọdịnihu. . China akwadebewo maka nje ahụ na maka ọdịnihu ga-emeghe.
Post oge: Dec-08-2020